Wengamele udedangendlale wepulazi oqeqeshelwe ezolimo nosimamayo kule ndima. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
UMnu uSabelo Nyaba, oneminyaka ewu-27, uyimenenja yeKwaCele Farming, ipulazi elingamahekthare awu-2 800, elikhiqiza ubhanana, umoba namakinati ekhethelo i-macadamia.
IKwaCele Farming yipulazi elikhulu eliseNhlangwini phakathi kwaKwaMaphumulo nakwaDukuza. Kudala belibizwa ngeCrookes Brothers, nokuthe selithengwe wuhulumeni lase libuyiselwa kubantu ngo-2009 lase libizwa ngeKwaCele Farming, ngoba lisendaweni yeNkosi uCele.
Udedangendlale weKwaCele Farming KwaMaphumulo, eKZN
Echaza ngokungena kwakhe kwezolimo, uNyaba uthi ukhule kubo kuvele kulinywa, nokwenze wafisa ukuqhubeka nomkhakha wezolimo ukuze athole olunye ulwazi olungaphezu kwakufunde kubo.
“Ngemva kokuphothula uMatikuletsheni ngo-2012 ngenze i-BSC in Agriculture e-University of KwaZulu-Natal ne-Honours engiyiphothule ngo-2016 ngosizo lweKwaCele Farming, eyangixhasa ngomfundaze,” kulanda yena.
IKwaCele Farming yayithembise ukumqasha ngokugcwele uma esephothule izifundo zakhe.
“Kuthe ngo-2017 ngaba yithwasa eSASRI (iSouth African Sugar Cane Research Institute), nakhona ngasheshe ngashiya emva kwama(sonto) amahlanu (ngenkathi) iKwaCele Farming isingiqasha ngokugcwele njengokuthembisa kwayo,” kukhumbula uNyaba.
“Nakhona ngifike ngaba yithwasa isikhashana kwathi ngokuzikhandla kwami ngaba yimenenja yepulazi ngasekupheleni kwa-2017. Ngo-2019 ngikhushulelwe kwesokukuba yimenenja jikelele yepulazi ngokubambisana nabalingani ababili engisebenzisana nabo ukwenza lomsebenzi,” kusho uNyaba.
Ubhanana ngenye yezinto ezitshalwa KwaCele Farming KwaMaphumulo, eKZN
Umsebenzi kaNyaba wukuqinisekisa ukuthi konke kuhamba kahle epulazini nokuthi izisebenzi ziwenza kahle umsebenzi, abheke nokuthi zihlala zigculisekile. Wenza okufanayo nakwizitshudeni ezintathu abazithatha njalo ngonyaka.
“Konke loko akusiwo umsebenzi olula, ikakhulukazi ngoba ngisemncane futhi izisebenzi eziningi epulazini ngabantu abadala. Kwesinye isikhathi kuyenzeka kube nezinqumo okufanele ngizithathe yize zingegculise wonke umuntu.
“Nokuthi njengoba leli pulazi lathengwa wuhulumeni ngenhloso yokubuyisela umhlaba kubantu, ngibhekene nomsebenzi wokuqinisekisa ukuthi laba bantu abawu-800 elakhiwe emhlabeni wabo, bathola izimfanelo zabo njalo ekupheleni konyaka,” usho kanje.
Uthi nakuba engakakucabangi ukushiya umsebenzi awenza KwaCele Farming okwamanje kodwa naye uyafisa ukugcina esenomhlaba wakhe azowulima eminyakeni embalwa ezayo.
“Ngifisa ukuthi ngithi ngifika eminyakeni ewu-35 ngibe senginepulazi lami engizosebenza kulona ngenhloso yokushiyela umndeni wami ifa,” kuphetha uNyaba.
Facebook: Sabelo Nyaba